Nopetahan’ny fitsarana Belarus ho “extremiste” ny seha-mpampitam-baovao mahaleotena Tut.by, Zerkalo.io · Global Voices teny Malagasy
Efa nesorin'ny Tut.by ny arisivany ao amin'ny media sosialy
Voadika ny 20 Aogositra 2021 3:47 GMT
Fangom-bavahadin'ny TUT.BY, CC BY-SA 4.0, tao amin'ny Wikimedia Commons. Namboarin'i Tanya Lokot.
Notondroin'ny fitsarana distrika afovoan'i Minsk ho ‘extremiste’ ny tranonkalam-baovao mahaleotena malaza indrindra ao Belarus, ny Tut.by, sy ny Zerkalo.io, seha-baovao iray natsangan'ny mpitatitra teo aloha tao amin'ny Tut.by. Ny didy dia mihatra amin'ny singam-botoaty tsirairay ao amin'ny tranonkala, sy ny votoaty rehetra naranty tao amin'ny fantsona media sosialiny.
Araka ny tranonkalam-baovao mahaleotena Mediazona Belarus, ny didim-pitsarana dia mifototra amin'ny fitoriana iray napetraky ny minisiteran'ny atitany belarosiana tamin'ny Jona 2021, mitaky ny hamantarana ny tatitra sy ny fisiana ao amin'ny media sosialy ny Tut.by ho mpitrifana amin'ny karazany. Ny fitarainana dia mifototra amin'ny “fanarahamaso an'aterineto” nataon'ny minisitera tamin'ny Febroary 2021, izay mahita “porofom-panitsakitsahana izay manosihosy ny tombontsoan'ny Repoblikan'i Belarus” izay hita ho maneho “endrika extremisme”.
Nanazava ny Belarosiana mpikaroka Mariya Rohava fa ny fanondroana vaovao hoe ‘extremiste’ dia mety hampisy fiantraikany lavitra ho an'ny fampitam-baovao sy ny mpamaky ao aminy.
Tondroina ho “extremiste” amin'izao fotoana izao ao Belarus ny seha-baovao mahaleotena goavana TUTby, izay novelomina ho Zerkalo, mbamin'ny tambajotra sosialiny. Midika izany fa ny mitahiry na mandranty indray izay votoatin-tambajotra dia mety hitarika mankany amin'ny fandoavana onitra ara-pitantanam-panjakana na fisamborana.
Voabahana ao Belarus tamin'ny 18 mey 2021 ny tranonkala renin'ny Tut.by, ary tsy azo kitihina noho ny fiampangana ho manao hosoka amin'ny resa-ketra ny kaonty bankin'ny fikambanana. Nisy famotorana heloka bevava natao tamin'ny mpitantana ilay seha-baovao, ary mpiasa 15 no nohazonina. Ary mbola mifonja ny ankamaroan'izy ireo.
Tamin'ny 28 jona lasa teo, nesorin'ny Tut.by avokoa ny [mg] ranty media sosialy rehetra avy aminy tao anatin'ny 18 volana ho fiarovana ny sisa tavela tamin'ny ekipany sy ny mpamaky ao anatin'izao famoretam-panjakana mihatra amin'ny fampitam-baovao mahaleotena izao. Maro ireo ekipan'ny efi-panoratam-baovao no miezaka tsy ho tratran'ny fihazonana sy ny fisamborana, ary ekipa kely dia kely kokoa naorin'ny Zerkalo.io tamin'ny Jolay 2021, tokoa manko no nivoady “hanohy” ny iraka tontosain'ny Tut.by amin'ny fitaterana mahaleotena amin'ny vaovao sy lanonana belarosiana.